P15.625 ကွက်ကွက်လပ် LED display ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကာတွန်းကုလားကာနံရံဗီဒီယိုမျက်နှာပြင် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
LED ကုလားကာမျက်နှာပြင်သည်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များအတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များရှိသောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ LED အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. သမားရိုးကျကက်ဘိနက်အမျိုးအစားပြမျက်နှာပြင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ဟုတ်တယ် 65% ပေါ့ပေါ့တန်တန် 80% ပိုပြီးပွင့်လင်း.
အပြင်ဘက်တွင် p15.625 p31.25 အပြင်ဘက်ကွက်မျက်နှာပြင်ပွင့်လင်းခါးပန်းမျက်နှာပြင်
LED ကုလားကာမျက်နှာပြင်သည်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များအတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များရှိသောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ LED အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. သမားရိုးကျကက်ဘိနက်အမျိုးအစားပြမျက်နှာပြင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ဟုတ်တယ် 65% ပေါ့ပေါ့တန်တန် 80% ပိုပြီးပွင့်လင်း. ၎င်းသည်အဆောက်အအုံအတွင်းရှိသဘာဝအလင်းရောင်နှင့်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ချက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ, နှင့်အဆောက်အ ဦး ၏အသွင်အပြင်အပေါ်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိမ့်နှင့်ပိုပြီးပွင့်လင်းသည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ၎င်းသည်တပ်ဆင်မှုအတွက်အဆင်ပြေစေပါသည်, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်
0008000CD / ㎡